Mareykanka oo muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan Itoobiya – Xeernews24
22. Oktober 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
October 22 (Xeernews24)
Dowladda Mareykanka ayaa muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan dalka Itoobiya oo qalalaaso iyo kacdoono looga soo horjeedo dowladda ay ka socdaan.
War ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in muwaadiniinta Mareykanka aanay u safrin Itoobiya iyo magaalooyinka ay rabshadaha ka socdaan.
Sidoo kale waxaa lagu wargeliyay dadka Mareykanka ee ku sugan Itoobiya inay taxadaraan oo ay yareeyaan dhaq dhaqaaqyadooda, isla markaana aanay ka ag dhowaan goobaha dibad baxyada ka dhacaya.
Haweeney Mareykan ah lagu dilay Gobolka Oromada, kaddib markii gaari ay saarneyd dhagxaan ay tuurayeen dad dibad baxayay ku dhacay.
Dowladaha reer galbeedka ayaa digniino ka soo saaray safaro lagu tago Gobolada Amxaarada iyo Oromada, sidoo kale waxaa ay yareeynayaan dhaq dhaqaaqyada diblomaasiyadeed.
Dowladda Itoobiya ayaa xukun deg deg ah oo soconaya lix bilood ku soo rogtay dalka oo dhan, si ay xal ugu hesho rabshadaha wali ka socda Gobolka ay degaan qowmiyadaha Oromada iyo Amxaarada oo dhigaya dibad baxyo ka dhan ah dowladda.
Hey’addaha xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyay dowladda Itoobiya inay xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ay geysatay, waxaana tan iyo markii dibad baxyadu bilowdeen la sheegay inay dhiteen dad boqolaal ah.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/10/1476016942f2d0d.jpg 450 800 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-10-22 09:24:172016-10-22 09:24:17Mareykanka oo muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan Itoobiya
Maxaa ka jira in ay Dawlada u Dirayso ciidamo ka Dagaalka Gala Dalka yamen? Kaftan Siyaadeed xigmad iyo Xaqiiq ku Salaysan